Ny Tatitra SoDA 2013 - Volume 2 | Martech Zone
Alarobia, Novambra 6, 2013 Talata, Novambra 5, 2013 Douglas Karr
Ny fanontana voalohany an'ny Tatitra SoDA 2013 efa manakaiky ny 150,000 ny fomba fijery sy ny fisintomana!
Ny fizarana faharoa amin'ny famoahana dia vonona hojerena. Ity fanontana ity dia misy fitambaran-javatra mahavariana amin'ny sanganasa mpitarika, dinidinika feno fahitana ary asa tena foronina noforonina ho an'ny marika ambony toa an'i Nike, Burberry, Adobe, Whole Foods, KLM ary Google. Ny mpandray anjara dia misy mpanoratra vahiny malaza avy amin'ny marika manga-manga, consultancies ary fanombohana vaovao, ary koa ny luminaries avy amin'ny orinasan'ny mpikambana ao amin'ny SoDA manerantany.
Ohatra iray indray ny kaliberan'ny atiny izay ao anatin'ity boky ity. Ny mpikambana ao amin'ny SoDA sangany, mpiara-miombon'antoka ary mpitarika indostria hafa dia manome ny fomba fijeriny farany momba ny fanavaozana dizitaly sy ny fetra manjavozavo amin'ny marketing nomerika, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny famolavolana vokatra. Tony Quin (Seza Birao SoDA sy CEO an'ny IQ).
Amin'ity volavolan-dalàna ity, dia nanam-bintana ihany koa ny SoDA niara-niasa tamin'ny mpiara-miasa AOL hanombohana ny sasany amin'ny valiny azo avy amin'ny fandalinana azy manokana momba ny fihenan'ny fikandrana mividy sy ny vokatra marobe amin'ny fampiasana finday avo lenta amin'ireo fotoana nahena ireo mba handraisana fanapahan-kevitra amin'ny sokajy vokatra sy sokajy serivisy maro karazana. .
Momba ny SoDA - The Global Society for Digital Marketing Innovators: SoDA dia tambajotra sy feo ho an'ireo mpandraharaha sy mpanavao eran'izao tontolo izao izay mamorona ny ho avin'ny traikefa marketing sy nomerika. Ireo mpikambana ao aminay (masoivoho nomerika ambony sy orinasa mpamokatra sangany) dia avy amin'ny fanasana ihany ary avy amin'ny firenena 25+ manerana ny kaontinanta dimy. Adobe no mpanohana ny fikambanana mpanorina an'i SoDA. Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fikambanana hafa dia ahitana Microsoft, Econsultancy ary AOL.
Tags: Soda 2013Tatitra soda 2013AdobeAOLBurberryeconsultancyFikambanana manerantany ho an'ny mpamorona nomerika nomerikaGoogle +IQKLMMicrosoftNiketatitra sodaTony QuinSakafo manontolo